Amanqaku omsebenzi Ukuthelekiswa kwee-Campus SUNY
Ukuba uyazibuza ukuba unemigangatho ye-ACT uzodinga ukungena kwenye yeekholeji ze-SUNY kunye neeyunivesithi zeminyaka emine, nolu luhlu lwamacala aphakathi kwamaphesenti ama-50 abafundi ababhalisile. Ukuba izikolo zakho ziwela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwelinye leyunivesithi kawonkewonke e-New York State.
UMTHETHO WENKQUBO YOMSEBENZI Umlinganiselo wokulinganisa (phakathi kwama-50%)
Albany 22 26 - - - - ubone igrafu
Alfred State 19 24 16 23 19 26 -
Binghamton 28 31 - - - - ubone igrafu
Brockport 20 25 18 24 20 26 -
Buffalo 24 29 - - - - ubone igrafu
State Buffalo 17 22 16 22 18 22 ubone igrafu
Cobleskill 20 24 - - - - -
Cortland 22 25 20 24 21 26 ubone igrafu
Amahlathi 23 27 22 28 23 27 -
Farmingdale 19 23 - - - - -
UFredonia 22 27 - - - - -
Geneseo 25 29 - - - - ubone igrafu
KwiKholeji yaseMaritime 23 27 - - - - -
Morrisville 17 22 16 21 16 23 -
ENew Paltz 23 27 22 27 22 26 ubone igrafu
Old Westbury 19 24 - - - - -
Oneonta 22 26 20 25 22 26 ubone igrafu
Oswego 22 27 - - - - ubone igrafu
Plattsburgh 21 25 20 26 19 25 -
Polytechnic 24 29 22 27 24 29 -
Potsdam Ukuvavanywa-Okungenayo ukuKwamkelwa
Ukuthenga 20 27 21 29 19 26 -
Stony Brook 26 31 24 31 26 32 ubone igrafu
Gcina ukhumbule ukuba i-SAT ivame ukuba yinto ethandwa kakhulu kunomthetho kwiNew York State. Nangona kunjalo, ngaba uviwo luyamkeleka ngokupheleleyo. Ngeke ube nengozi ngokusebenzisa UMTHETHO, kwaye kufuneka usebenzise amanqaku avela kwiimviwo ozikhethayo.
Ukuba umyalelo wakho we-ACT ungaphantsi kwenani elingaphantsi kwithebhile elingentla, lonke ithemba alilahlekanga. I-25% yabenzi bezicelo abaya esikolweni se-SUNY nabo banamanani kumgangatho we-25 we-percentile. Ukuvunyelwa kuya kuba nzima kakhulu kumanqaku angaphantsi, kodwa akunakwenzeka.
Kwakhona qaphela ukuba imilinganiselo yokumkelwa kwamanye amazwe iyahluka kakhulu ukusuka kwelinye iklasi ukuya kwelinye. IYunivesithi yaseBinghamton, umzekelo, ikhetha kakhulu kwaye phantse bonke abafundi abavunyelwe ukuba banamabanga amabini kunye namanani ovavanyo olumgangatho ophezulu kakhulu ngaphezu komyinge. I-Binghamton yenye yeekholeji eziphezulu kwiNew York State . Ezinye iikhampasi ezinjengeMorrisville kunye neCobleskill azikhethi kakhulu.
Imiba Yakho Imfundo Yemfundo Ngaphezulu kweMTHETHO
Qaphela ukuba ii-ACT izikolo ziyingxenye enye yesicelo.
Inxalenye ebalulekileyo yesicelo sakho se-SUNY iya kuba yirekodi yakho yezemfundo. Qinisekisa ukuba unemfundo efanelekileyo kwizifundo eziphambili zemfundo ezifana nolwimi lwangaphandle kunye nezibalo . Kwakhona kubalulekile ukubonisa ukuba uzenzele umngeni, ngoko ke iikholeji eziphambili ze-Placement (AP), iiklasi ze-IB, iiklasi ze-Honors, kunye neeklasi zokubhalisa ezimbini zibalulekile ekuncedeni ukubonisa ukulungelelaniswa kwekholeji yakho.
Abantu abangenayo i-SUNY baya kukhangela amanyathelo angenani, kuba iikholeji zeminyaka emine kunye neeyunivesithi kwi-network ye-SUNY zonke zivunyelwe ngokupheleleyo . Isicatshulwa esinamandla kunye nemisebenzi yecandelo lexesha elithile linokuthi ludlale indima ebalulekileyo kwinkqubo yokungena. Kwezinye iikhampasi, iitalente ezikhethekileyo kwiindawo ezinjengemidlalo okanye umculo unokunceda ukulungiselela amanqaku afanelekileyo okuvavanya angaphantsi kokufanelekileyo.
> Iinkcukacha ezivela kwiZiko likaZwelonke leeNkcukacha zezeMfundo
UMTHETHO Ufumana ubungeniso kwiNgqungquthela yaseBig East
Isikhundla esijikelezayo kwi Bowling
Ixesha leMpuma yeNkantyambo yaseMpuma
Ngaba uBrazil waxela malunga neGrafu elahlekileyo ngomhla we-4 kaJulayi?